Hlola Ngokuhlolisisa Imininingwane Yesivumelwano Sakho ngokuVotelwa Kwesivumelwano | Izinkampani Zomthetho eDubai
Hlola Kahle Imininingwane Yesivumelwano Sakho ngokusebenzisa Inkontileka Yokwenza Imali
Inkontileka engokomthetho noma isivumelwano kumane nje kuyingxenye yamadokhumenti asayinwa amaqembu amabili, kepha kuvikela ibhizinisi lebhizinisi lakho ngamalungelo nezixazululo. Isivumelwano sakha izibopho, izimo, izindaba zezimali, imikhawulo yesikhathi, nokuningi ukuze yonke ingxenye yesivumelwano ivalwe kahle, okuthi uma yehluleka, ingaholela ekulahlekelweni okungalindelekile.
ukuvunyelwa kwezomthetho kuyadingeka eDubai nase-UAE
izivumelwano zomthetho noma izinkontileka
ukukhishwa kwenkontileka kwamadokhumenti
Ngaphandle kokukhuthala okufanele kokuvumelanisa kwezinkontileka, singasayina izinkontileka ezinemibandela engasebenzi lapho kungasizakali thina noma izintshisekelo zethu.
Kuyini i-contract Vetting
I-Vetting Yezinkontileka noma i-Legal Vetting kusho isenzo sokuhlola ngokucophelela nangokuhlolisisa imibhalo ukuthi yenziwe kanjani ngokomthetho. Ukuqashwa kwezinkontileka kubangela ukukhuthala kwesivumelwano, okuqinisekisa okulandelayo:
Ukuhlolwa ngokusemthethweni kwemibhalo ehlukahlukene yenkampani ngabameli. Iseluleko Sommeli ezindabeni ezibucayi. Ukuhambisana komthetho.
Zonke izinto zokuphepha zithathwa
Ukuchazwa kwezindima ezithile
Izinkinga zibekiwe kahle
Ukucaciswa kwezici namagama wemali, njll.
isibopho kanye nezibopho zabo bonke abathintekayo
Izinkontileka zenzelwe ikakhulukazi, zakhiwe, futhi zenziwa yizinkampani ngombono wokumaka isibopho nezibopho zabo bonke abathintekayo ukunciphisa izingcuphe. Abanini bamabhizinisi amancane nabaphathi bezinga eliphakeme bavame ukubhala izinkontileka kuzo zonke izikhathi zabo.
Njengoba kunesidingo sesivumelwano okufanele sifundwe, siqondwe, futhi sihlaziywe ngamagama namagama asetshenziswe emzimbeni wesivumelwano. Kuyadingeka ukuthi ngaphansi kwemibandela kungafakwa amagama okufakwayo noma ukuthi enye incazelo kufanele idluliselwe ngaphandle kwalokhu okuqondakala ngokoqobo.
Ukuqashwa kwenkontileka yobuchwepheshe nokuhlola
Ngakho-ke, ukuya kuma-vetting asemthethweni kuyadingeka uma ufuna ukuzisindisa ezimweni ezingalindelekile ezazingavinjelwa uma isenzo esisemthethweni esifanele senkontileka yokuqothulwa kwemibhalo senziwe ngesikhathi.
Kungokuzibulala ukusebenzisa izivumelwano / inkontileka yezomthetho / isitifiketi, futhi yingakho kubalulekile ukuya kuchwepheshe wezomthetho ongaqedela idokhumenti yezomthetho efanelekile kanye nokuthengiswa kwezinkontileka zomsebenzi.
Izici Ezisemqoka Zokuqanjwa Kwenkontileka
Ukuqashwa kwezinkontileka kudinga ukuthi umuntu enze ukuhlola okujulile kwenhloso, imishwana, ukuphindaphindwa, kanye nengozi ukuvikela isidingo seklayenti, kanye nokwenza lula ukuhamba okuhamba kahle.
Umthetho oyinkontileka oyinhloko udonswa emthethweni wenkontileka wamaNgisi, obeka kakhulu isifiso sokuthola izinkontileka amaqembu azibophela esivumelwaneni sokushintshana ngebhizinisi noma ngenkonzo.
In UJones V Padavatton, izinkantolo bezifuna ukuchaza ngokucacile umehluko phakathi kwamalungiselelo omndeni nezivumelwano zebhizinisi. Isivumelwano somndeni ngaso sonke isikhathi asibophisi futhi izivumelwano zesivumelwano kufanele sizibandakanye kubo ngenhloso yokuthengisa ngokucacile. Ngakho-ke, ngenkathi izinkontileka zisenziwa, inhloso yokubopha omunye nomunye ngokusemthethweni ebhizinisini kufanele icace.
Ukulandela okuvela ngaphezulu, kubalulekile ukubheka ukuthi izinhlangano eziya esivumelwaneni ziyaziwa yini, igunya lazo lokumelela izinkampani zazo ezihlukile kanye nekhono lokuthola inkontileka nendawo yebhizinisi elihloliwe. Ezimweni lapho kunabantu abangafika kwabangu-3 noma ngaphezulu othintana nabo, ukuqina kokuhlolisisa kungadinga ukuthi kube nzima kakhulu ukukwazi ukusungula inhloso yomuntu ngamunye.
Lapho amaqembu azibopha ngebhizinisi, inhloso yesivumelwano kufanele ibe sobala.
Uma inhloso iphathelene nokuthengiswa kokuhle, kunengqondo ukuthi u- "x" wenza futhi athengise izimpahla ze-AB futhi u- "z" ungumenzi wezimpahla ze-XY lapho okokufaka kwe-AB kungukufakwayo.
Ekuthengisweni okulula kokuhle, lapho imikhiqizo ifane khona, kungadingeka ukuthi incazelo ethile ayinikeziwe, kepha ngendlela yokuqaphela, kunengqondo ukusho nokuchaza "Izimpahla," "Amaqembu," "I-oda yokuthenga," "" Usuku Lokulethwa, "" usuku nendlela ekhokhwa ngayo, "'Indawo yokulethwa," "ukwesulwa," njll. Lokhu kuqinisekisa ukuthi amagama asho into efanayo ngomqondo ofanayo nakumaqembu anenkontileka futhi afanele izimfuno zawo.
Kodwa-ke, lapho izidingo zomkhiqizo ezenziwe ngokwezifiso ziyinkimbinkimbi, njengama-boilers, izinto ezikhethekile zogesi, izimpahla zobunjiniyela, njalonjalo, kungakuhle ukuthi uqinisekise ukuthi zonke izincazelo nezincazelo zichazwa kakhulu.
Ngemuva kwalokho, isivumelwano kufanele sisho yonke imigomo nemibandela okufanele kwenziwe ngayo ibhizinisi.
Ngabe ukuhlungwa kweSivumelwano kuhluke kanjani kwiContrameet Vetting?
Ukubhalwa kwezinkontileka kanye ne-vetting yenkontileka yizigaba ezimbili ezihlukene zenqubo yenkontileka. Ukubhalwa kwezinkontileka inqubo efaka phakathi umuntu oyilwayo ohlela inkontileka ukusuka endaweni yokuqala kuze kube sekupheleni.
Ngenqubo yokuvulwa kwenkontileka, umuntu okubhalayo ungumbuyekezi futhi uzosebenza kuthempulethi yenkontileka ekhona (leyo esivele ibhaliwe) ukwenza lokho okungeziwe nokususwa kuthempulethi yenkontileka ekhona.
gxila izikhombisi ezihlukile kuthempulethi yenkontileka ekhona
Ochwepheshe abasebenza ezinkampanini ezithile bazokwazi ukwenza izinkontileka ngezizathu ezimbili:
Kungenzeka ukuthi izinkampani ezinjalo zizoba nezethempulethi zazo; futhi
Abakwa-Counterparty bathumela kuthempulethi yabo yenkontileka ukuthi ibuyekezwe.
Ngenqubo yokuvunyelwa, ijika lokufunda lilinganiselwe ochwepheshe ngoba badinga ukugxila kuzikhombisi ezihlukile kuthempulethi yenkontileka ekhona futhi bangatholi ithemba lokwenza umsebenzi kuqala.
ucwaningo olunzulu ngemishwana ehlukene
Kodwa-ke, ngakolunye uhlangothi, ohlelweni lokubhalwa kwenkontileka, umuntu okubhalwayo uvame ukuloba yonke inkontileka yakhe uqobo ngokugxila okukhethekile kulelo nalelo phuzu lemizuzu ukusuka endaweni yokuqala kuze kube sekupheleni.
Ukubhalwa kwezinkontileka kuvumela umuntu owenza okubhaliwe ukuthi athole ithuba lokufunda ubuciko bokwakhiwa kokubhalwa ngokuhlinzekwa, okwenza ukuthi kube nokwenzeka ngocwaningo olunzulu kumagatshana ahlukene ukuze afunde isigatshana ngasinye kuya ekujuleni.
Kunconywe ukuthi izingqondo zomthetho ezisencane zigxile ekubhaleni inkontileka yokufunda (ukufunda umsebenzi wezandla zokuqala) kuya emnyameni ukuze ibe nekhono ekubhaleni inkontileka noma kwinkontileka yokuvulwa kwezinkontileka.
Enterprise Legal / Drafting Contracts / Vetting
Ukuhlelwa Kwenkontileka Nabahlinzeki Bezinkontileka Zokuqashwa eDubai. Ukususwa kwezomthetho kwemibhalo ehlukahlukene. Ukunikeza Umbono Wezomthetho. Iseluleko ezindabeni ezibucayi. Ukuhambisana kwezomthetho.